Turkish Aegean Coast | RayHaber
mushaTURKEYTurkish Aegean Coast
Dzvanya kuguta iri pamepu kuti uverenge Aegean Region railway, mugwagwa mukuru uye kabheji car news!
İzmir Metro Maawa: İzmir Metro yave ichishanda pasi pevhu nepamusoro pevhu uye pasi pekufambisa mukati meguta kwemakore mazhinji. İzmir, ine network yechitima yakakura, [More ...]
TCDD 3. Netsika yakarongedzwa neRegional Directorate, 20 timu yakatora chikamu uye yakatamba seyakakwana 52 carpet shamba nhabvu yemitambo yakatanga pa21.11.2019 uye 02.12.2019 pa İZBAN uye TCDD Liman Spor [More ...]
Izmir Sustainable Urban Logistics Chirongwa Yakagadzirirwa
Izmir Sustainable Urban Logistics Plan yakagadzirirwa; İzmir Metropolitan Municipality yakagadzirira İzmir Sustainable Urban Logistics Plan (LOPİ) nechinangwa chekugadzira vatakuri uye mafambiro ezvekutakura muguta iri muchiedza cheEuropean maitiro uye sainzi maitiro. Lopik, [More ...]
Nguva yeVisa yevakuru nevakaremara Denizli Kadhi
Nguva yeVisa yevakuru nevakaremara Denizli Kadhi; 65 yakwegura uye kupfuura makore, vakaremara uye vanobvumirwa zviri pamutemo vanobatsirikana nekutakurwa kwakapihwa neDenizli Metropolitan Municipality [More ...]
3 PaZvita Zuva reNyika reVanhu Vakaremara, 61 yasvika huwandu hweRedhi Mhare dzakabata muIzmir. Iyo Red Flag inomiririra nzvimbo dzinowanikwa kune vakaremara vagari. Sezvo kutanga chete rakatangwa muna Izmir, Turkey [More ...]
6 Kambani Yakagadzirirwa engineering Tender ye İzmir Karabağlar Metro; ; Mune iyo nyoro yeKarabağlar Metro, 6 kambani yakapa mutengo. Iyo nyoro ichapedzerwa mumazuva anouya. Chikamu chechitatu chakasvikwa mukunyorova kweKarabağlar Metro chirongwa. [More ...]
İzmir Pasina Zvipinganidzo Zvakasaina Imwe Nheyo; Ahmet Uğur Baran, nhengo yakaremara yekanzuru, ari kushanda senge prox İzmir Meya Tunç Soyer pa 3 Zvita Zuva reVanhu Vese Vakaremara. Baran, ichi kushanda Turkey [More ...]
Nekushandisa nyowani kweIzimir Metropolitan Municipality, zvichave zvichigona kufamba pamabhazi emunharaunda aine mabhasikoro ekupeta mune dzimwe nguva. The Metropolitan Municipality yakasaina mapurojekiti akakosha ekuita İzmir "guta rine bhasikoro,. [More ...]
Exercise ESHOT Inowana Rakakwana Giredhi Kubva kuVanyanzvi
Exercise ESHOT Inowana Giredhi Yakazara Kubva Kune Nyanzvi; ESHOT General Directorate Gediz Kurema Kwekuchengetedza Zvivakwa mukudengenyeka uye kudhira kwemoto yaive maminitsi anonakidza. Izmir Metropolitan Municipality ESHOT General Directorate, maererano nemutemo nguva dzose [More ...]
ESHOT Inotora Matanho Ekupokana Kwemamiriro ekunze
ESHOT Inotora Zviyero Zvematambudziko Emamiriro ekunze; İzmir Metropolitan Municipality Tunç Soyer yakazivisa kuti: İzmir ichatema gasi redhivhuvhu ne 2030 muzana ne 40 Global mamiriro ekunze anowedzera zuva nezuva [More ...]
Ankara İzmir YHT 2022 Year Completes; Minister Turhan vakaita mharidzo kuParamende Yekuronga uye Budget Commission uko bhajeti reIse Ministry of Transport and Infrastructure rakakurukurwa mugore re2020. [More ...]
ESHOT Call Center Inogadzirisa Dambudziko Revagari
ESHOT Call Center Inogadzirisa Dambudziko Revagari; Chinenge 6 zviuru zvinoshandiswa zvinoitwa kunzvimbo yekufona yeESHOT General Directorate paavhareji pamwedzi. 82 muzana yezvikumbiro inogadziriswa nekukurumidza. ESHOT Call Center Citizens [More ...]
Izmir Investment Investment Inotambira Kugovana Kweshumba mu2020 Budget; 7 bhiriyoni 950 miriyoni mapaundi 2020 bhajeti reIzmir Metropolitan Municipality rakagamuchirwa muMunharaunda yeKanzuru. 32,6 muzana muzana yemari yakawedzera kana zvichienzaniswa neyakaitika makore apfuura [More ...]